Dood wadaag ku saabsan amniga, xaquuqul insaanka oo lagu qabtay Muqdisho | sowora
← Making markets safe for women vendors in Papua New Guinea
Somalis campaign for their children to not suffer FGM →
Dood wadaag ku saabsan amniga, xaquuqul insaanka oo lagu qabtay Muqdisho
Kulankan dood wadaaga ah oo ay soo qaban qaabisya Hay’adda Xaquuqda Aadanaha ee Elman ayaa waxaa ka qeyb galay xubno ka tirsan labada gole ee dowladda, siyaasiyiin, aqoonyaho iyo bulshada rayidka, kaasi oo lagu qabtay Muqdisho.
Kulanka ayaa waxaa looga hadlay amniga, xuquul insaanka, dib u dhiska dalka, kaalinta siyaasadeed ee haweenka, kaalinta dhalinyarada ay ka qaadan karaan dib u dhiska dalka iyo xojinta waxbarashada, iyadoo intii ay socotay dooda kulanka la isku waydaarsaday arragtiyo ka turjumeysa muhiimadda ay qodobadaasi leeyihiin.
Fartuun Cabdisalaan Aadan oo ah madaxa Hay’adda xaquuqul insaanka ee Elman oo ka hadlaysa ujeeddada kulanka ayaa sheegtay in shirkan uu ahmiyad weyn ugu fadhiyo ka qeyb galayaasha, iyadoo sidoo kale ka hadashay dadka ku dhibaateysan goobaha laga xoreeya Al-Shabaab in gar gaar lala gaaro.
Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo isna kulanka hadal ka jeediyay ayaa ka hadlay ahmiyadda amniga iyo howlgallada dalka ka socda ee maleeshiyada Al-Shabaab looga xoreynayo goobaha fara ku tiriska ah ee ay dalka kaga suganyihiin, isagoo ku baaqay in la xoojiyo howlgalladaasi.
Xildhibaan Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan ayaa ka hadashay doorka haweenka Soomaaliyeed ee ay ka qaadan karaan siyaasada iyo dib u dhiska dalka, iyadoo xustay haweenka looga baahanyahay inay ku noqdaan kuwa isku duuban oo ka tashada aayahooda.
Eng, Nadiifo Maxamed Cismaan Wasiirka Howlaha Guud iyo dib u dhiska ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqday in Wasaaraddu ay qorsheynayso in dib u dhis balaaran ay kusameyso goobihii ay dowladdu lahayd, iyadoo su’aalo ku saabsan dhanka amniga, waxbarashada iyo dib u dhiska uga jawaabtay ka qeyb galayaashii kulanka.
Kulanka ayaa ku soo idlaaday sidii loogu talagalay, waxaana la isla afgartay in la joogteeyo kulamada nuucaani oo kale ah.